I-Semalt: Ungavimbela kanjani ukulandelwa kwezikhangiso ze-intanethi?
Konke abantu abakwenzayo kwi-intanethi kungalandelwa kalula, futhi izinkampani ezi-intanethi ziqoqa imali enkulu mayelana namakhasimende abo nsuku zonke. Basebenzisa le datha ukuthengisa imikhiqizo ehlukene futhi bahlose izilaleli ezifanele. Ibuye isetshenziselwe ukuthumela imilayezo yokuthengisa eyakhelwe ngabomuntu futhi ehlosiwe uma ushaya iWeb Wide Web. Kuphephile ukusho ukuthi ukulandelela okuku-inthanethi kuye kwaphakamisa ukukhathazeka okuyimfihlo ezinyangeni zamuva.
Asikwazi ukufinyelela idatha yazo zonke izinkampani, kodwa ziqoqa ulwazi lwethu nsuku zonke. Asazi nokuthi singasebenzisa kanjani amasevisi abo nokuthi hlobo luni lwemikhiqizo abayinikezayo.
U-Ivan Konovalov, onguchwepheshe ophezulu kusuka ku Semalt , uqinisekisa ukuthi iningi lezinhlelo zokulandelela i-intanethi alinalutho futhi lingasetshenziswa ukukhomba ubugebengu kanye ne-cybercrime kwi-inthanethi.
Ukulandelela ukukhangisa kwe-intanethi kusebenza kanjani?
Amakhukhi kanye nobumfihlo be-intanethi yizinto ezimbili ezibangela ukukhathazeka kwi-intanethi. Mayelana nezikhangiso ezivela kumawebhusayithi, umshini unomthwalo wokurekhoda izinto eziqondile abasebenzisi abazisebenzisayo, upheqa bese upheqa phezu kwalo. Ibizwa ngokuthi uhlelo lokulandelela isikhangiso futhi lenzelwe ukuhlola ukusebenza nokusebenza kokukhangisa. Ezinyangeni zamuva, lesi simiso sithole impumelelo enkulu, futhi imikhiqizo eningi itholakele kuyo.
Amakhukhi wesithathu ahambisana nenxenye enkulu yesistimu yokulandelela isikhangiso. Amafayela amancane agcina ezipheqululini zewebhu ezisiza ukukhomba amawebusayithi osaka kakhulu kakhulu. Imininingwane yakho nama-URL agcinwa nsuku zonke, futhi amakhukhi avela kwihluzo ezifakiwe, izikhangiso eziku-inthanethi, namasayithi othanda ukuwavakashela.
Kufanele ukhumbule ukuthi amakhukhi asuke emuhle futhi emubi. Ngaphandle kwabo, amawebhusayithi ahlukahlukene afana ne-Facebook, i-Amazon, i-eBay, nabanye angeke afinyelelwe ngendlela efanele. Amakhukhi agcina ulwazi oluwusizo mayelana nesiphakeli sakho, ukusiza amasayithi athuthukise amasevisi awo futhi akunikeze ngokwakho okwenziwe ngokwakho futhi kangcono kunokwakuhlangenwe nakho ngaphambili.
Amanye ama-cookies, aklanyelwe ukusiza abakhangisi. Baxhomeke kulwazi oluqoqwe ngalezi cookies. Isibonelo, i-DoubleClick ye-Google ibhala amamethrikhi akho namaphrofayli ukukhomba ukuthi yiziphi izikhangisi nezikhangisi ezizohambela amasayithi akho kakhulu.
Vimbela ukulandelwa kwezikhangiso ze-intanethi
Njengoba kunikezwe uhlobo lwewebhu web jikelele, kungase kungabi usizo ukukhubaza amakhukhi. Ngithembele, sekudla isikhathi futhi enye yezinqubo ezicasula kakhulu. Ungakwazi ukuvimbela amakhukhi wokukhangisa ngokuwavimbela kusuka kusiphequluli sakho sewebhu.
I-Federal Trade Commission kanye nazo zonke izinhlaka zikahulumeni zibeke imithetho nemigomo ethile. Bobabili i-Yahoo ne-Google yanda nje inkinobho ye-Opt Out nokuphatha ubumfihlo kuma-akhawunti wabasebenzisi babo.
Ukuze unike amandla lolu khetho, kufanele uhambe ku-akhawunti yakho ye-Gmail noma ye-Yahoo uphinde uhlole Isikhungo Sobumfihlo se-Google noma iMenenja Yenzalo Yesikhangiso se-Yahoo. Lapha, uzothola inkinobho ye-Opt Out kanye nezinye izinkinobho ezimbalwa. Ungachofoza le nkinobho futhi ungenzi lutho ngokunye. Uma unezinkinga ezithile, kufanele uhlole amakhasi okusiza amawebhusayithi amabili.
Lungisa izilungiselelo zakho zesiphequluli
Iziphequluli ezihlukahlukene zizakhele izilungiselelo ukuze zimise amakhukhi athile kanye namabhodlela ekufakwe ohlelweni lwakho. Uma ungafuni ukunika amandla amakhukhi, kufanele ulungise izilungiselelo zesiphequluli sakho futhi umise izinhlelo zokulandelela izikhangiso ekuqopheni noma yini oyenzayo kwi-inthanethi. Kumele futhi ususe idatha etholakale esidlangalaleni ngokushesha ngangokunokwenzeka. I-ReputationDefender inikeza amakhasimende ayo ngezinsizakalo zokuvikela ubumfihlo eziphambili futhi eziyisisekelo futhi uqinisekisa ukuthi akunakwenzeka kubaphathi bewebhu kanye nezinkampani ukuthola ulwazi lwakho kwi-intanethi Source .